I-USOIll (i-WTI) iyancipha kwi-Downside, inokufumana iNkxaso engaphezu kwe-$ 75
Ukuhlaziywa: 20 Novemba 2021
USOIL iwele ngaphantsi kwee-avareji ezihambayo. Intsingiselo yeyokuba ukuthengisa ngakumbi kwicala elisezantsi kunokwenzeka. Isalathiso siwele phantsi kwe-75 yeedola. Iibhere zizama ukuqhekeza ngaphantsi kwenkxaso yangoku. Ukuxhaswa kwangoku kukuchasana kwangaphambili kukaJulayi 5. Uxinzelelo lokuthengisa luya kuqalisa kwakhona ukuba ixabiso liphuka ngaphantsi kwenkxaso yangoku. Oko kukuthi, i-USOIL iya kuphinda yehle iye kwi-70 yeedola.
I-USOIL ikwinqanaba lama-36 leSalathiso saMandla esiNxulumeneyo seXesha le-14. I-WTI ikwindawo ye-downtrend kwaye ingaphantsi kombindi we-50. Ii-SMA zeentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 zithambeka phezulu zibonisa ukonyuka. Imivalo yexabiso ye-WTI ingaphantsi kwe-avareji ehambayo ebonisa ukuhla okunokwenzeka
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isalathiso sisendleleni ehlayo. I-downtrend yenza i-low highs kunye ne-low lows. Okwangoku, ngoNovemba 18 downtrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye i-78.6% yenqanaba lokubuyisela i-Fibonacci. Ukubuyisela kwakhona kubonisa ukuba i-WTI iya kuwa kodwa ibuyele kwinqanaba le-1.272 i-Fibonacci extension okanye i-$ 75.09.
I-WTI ingaphantsi kwe-20% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Oko kukuthi, iwile kwindawo ethengisiweyo yemarike. Abathengi kulindeleke ukuba bavele banyuse amaxabiso phezulu. Ii-SMA zeentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 zihla zinyuka zibonisa ukuhla.
I-USDOL iye yahamba phantsi. Uxinzelelo lokuthengisa lufikelela ekuphelelweni kwe-bearish. Ngokutsho kohlalutyo lwesixhobo seFibonacci, i-WTI iya kuwela kwinqanaba le-1.272 isandiso seFibonacci okanye i-$ 75.09.
I-USOIL (i-WTI) ifumana iNkxaso eNgaphaya kwe-80 yeedola, ukuVavanywa kwakhona kwi-Resistance ye-85 yeedola kunokwenzeka
USOIL ikwi-uptrend kodwa ikwicala lokuhamba ngezantsi kwenqanaba lokuxhathisa le-$85. Ukusukela nge-26 ka-Okthobha, i-uptrend iye yaphazamiseka njengoko imarike iguquguquka phakathi kwe-78.50 yeedola kunye ne-85 yeedola. Ngamanye amazwi, ixabiso le-WTI liphakathi kwemiyinge emibini ehambayo. Isalathiso singaphezulu kwe-50-day SMA kodwa ngaphantsi kwe-21-day SMA. Ikhefu ngaphezu kwe-21-day SMA iya kubonisa ukuqaliswa kwakhona kwe-uptrend. Ngokufanayo, ikhefu elingaphantsi kwe-50-day SMA liya kubangela ukuba isalathisi siwe.
Ixabiso le-WTI liphakathi kwemiyinge emibini ehambayo ebonisa ukuhla okunokwenzeka kwamaxabiso. I-USOIL ikwinqanaba le-50 le-Relative Strength Index ixesha le-14. Ibonisa ukuba kukho ukulingana phakathi kokubonelela kunye nemfuno. Ii-SMA zeentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 zithambeka phezulu zibonisa ukonyuka.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isalathisi sikwindlela esecaleni. Ukususela ngo-Oktobha 25, iinkunzi zenkomo ziye zahluleka ukugcina ixabiso elingaphezulu kwe-85 ye-overhead resistance. Namhlanje, abathengi bahlawula ngaphezulu kwenqanaba le-80 yeedola ukuze banyukele phezulu. Okwangoku, ngoNovemba 11 downtrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye i-78.6% yenqanaba lokubuyisela i-Fibonacci. Ukubuyisela kubonisa ukuba i-WTI iya kuwa kodwa ibuyele kwinqanaba le-1.272 i-Fibonacci extension okanye i-$ 79.01.
Isalathisi singaphantsi kwe-20% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Amabhanti estochastic athambekele ngokuthe tye kummandla othengiswe kakhulu. I-uptrend iya kuphinda iqale xa abathengi bevela kwindawo ethengisiweyo. Ii-SMA zeentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 zityibilika ngokuthe tye zibonisa indlela esecaleni.
I-USDOL isekwindlela esecaleni. Ukuchaswa kwe-overhead kwi-85 yeedola kuseza kwaphulwa. I-WTI ithengisa kwi-80.82 yeedola ngexesha lokubhala. Abathengi banomsebenzi onyukayo wokuqhawula ngaphezulu komyinge ohambahambayo ngaphambi kokuba baphinde bavavanye ukuchasana okuphezulu.
I-USOIL (i-WTI) iqhubela phambili i-Bullish Run kodwa iFikelela kwiNgingqi eNcinciweyo
Amanqanaba enkxaso aphambili: $ 66.00, $ 62.00, iirandi ezingama-58.00
USOIL ikwintshukumo ephezulu. Namhlanje, isalathiso sinyuke saya kwi-84.15 yeedola nangona imeko ye-WTI ithengwa kakhulu. Le uptrend yamva nje iba namandla emva kokuqhambuka kwinqanaba le-76 yeedola. Namhlanje, iikhandlela zinexinzelelo olunamandla lokuthenga olubonisa ukuba imeko yangoku iya kuqhubeka ngokunyuka. Nangona kunjalo, akucaci ukuba ixesha elingakanani ixesha elikhoyo liya kuqhubeka ukunyuka njengoko isalathisi sifikelela kwindawo ethengiwe kakhulu yemarike.
Umndilili oshukumayo uthambele phezulu ukubonisa uptrend. I-USOIL (WTI) ikwinqanaba le-74 le-Relative Strength Index yexesha le-14. Oku kubonisa ukuba i-USOIL ifikelele kummandla othengiwe kakhulu. Umkhwa owomeleleyo awukhange uhloniphe imeko ethengwe ngokugqithisileyo yesalathiso. Umgca we-bullish trend ubonisa amanqanaba enkxaso yamaxabiso. Intsingiselo yangoku inokwenzeka ukuba iqhubeke ukuba nje umgca wetrendi uhlala ungophukanga.
Kwitshathi yeyure ezi-4, i-WTI ikwi-uptrend egudileyo, ixabiso le-USOIL lenza uluhlu oluphezulu oluphezulu kunye nokuhla okuphezulu. Izolo, i-uptrend yayichasene nenqanaba le- $ 84, kwaye yehla kwinkxaso engaphezulu kwe-50-day SMA. Namhlanje, ukunyuka okunyukayo kuqale kwakhona kodwa inqanaba lokumelana lisaza kwaphulwa.
Isalathiso singaphezulu koluhlu lwe-80% yestochastic yemihla ngemihla. Imarike isondela kummandla othengwe ngokugqithisileyo. Umfutho wangoku we-bullish kungenzeka uthobe. I-SMA yeentsuku ze-21 kunye ne-50-day SMA zihla zinyuka zibonisa ukunyuka.
I-USOIL (i-WTI) inokuthi iqhubeke kwicala elingasentla ukuba nje umgca wokunyuka kwezinto uhlala ungaphuli. Ukunyuka kwe-bullish kuye kwatshintsha ukususela nge-23 ka-Agasti.
I-USOIL (WTI) ifikelela kwi-Bullish Exhaustion, inokujamelana nokwaliwa kwi $ 80.84
Ukuhlaziywa: 9 October 2021
Amanqanaba aphikisayo aphambili: $ 66.00, $ 70.00, $ 74.00
Amanqanaba enkxaso ephambili: $ 48.00, $ 44.00, $ 40.00
USOIL kukunyuka okuphezulu. Namhlanje, i-WTI ithengisa nge- $ 79.50 ngexesha lokubhalwa. I-USOIL ibikukunyuka ukuya kwiinyanga ezintathu ezidlulileyo. Ngokwesalathiso sexabiso, i-USOIL ifikelela ekuphelelweni kukudinwa. I-RSI ifikelele kwinqanaba lama-69. Ukuqhubeka kwelinye icala kuyathandabuzeka.
Ngeli xesha, ngo-Okthobha u-5 uptrend; umzimba wekhandlela ovavanyiweyo uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci eyi-78.6%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba i-USOIL izakuphakama kodwa ibuye umva kwinqanaba 1.272 ulwandiso lweFibonacci okanye inqanaba lama- $ 82.49.
USOIL- Itshathi yemihla ngemihla
I-USOIL ine-crossover ye-bullish njengeentsuku ezingama-21 ze-SMA ezinqumleza ngaphezulu kweentsuku ezingama-50 ze-SMA. USOIL (WTI) ukwinqanaba lama-69 le-Relative Strength Index isithuba se-14. Ibonisa ukuba i-USOIL ifikelele kwingingqi esebenzileyo. Umfutho okhoyo ngoku onokubakho unokuhla. Kwangolo hlobo lunye, abathengisi kunokwenzeka ukuba bavele kwingingqi ethengiweyo.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, ixabiso le-WTI likukunyuka okuphezulu. Ukunyuka okuphezulu kujongene nokwaliwa kwindawo ephezulu yamva nje. Iinkunzi zeenkomo ziye zaphinda zaphinda zaphinda zafumana inqanaba leedola ezingama-79.76 kathathu kwaye zagxothwa. Ngeli xesha, ngo-Okthobha u-8 uptrend; umzimba wekhandlela ovavanyiweyo uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci eyi-78.6%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba i-USOIL izakuphakama kodwa ibuye umva kwinqanaba elingu-1,272 lokwandiswa kweFibonacci okanye inqanaba lama- $ 80.84.
USOIL-1 Itshathi yeYure
I-USOIL ingaphezulu kwe-50% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Isalathiso sikwi-bullish umfutho. Umgca weentsuku ezingama-21 ii-SMA zinqumleza ngaphaya komhla weentsuku ezingama-50 ze-SMA ezibonisa umqondiso wokuthenga.
USOIL (WTI) kukunyuka okuphezulu. I-uptrend ifikelela kukudinwa okuphezulu. Ngokwesixhobo seFibonacci, isalathiso siya kuphakama kodwa sibuye umva kwinqanaba 1.272 ulwandiso lweFibonacci okanye inqanaba leedola ezingama-80.84.
I-USOIL (WTI) ihleli kwi- $ 76.65, inokuphinda ithengise uxinzelelo
Amanqanaba enkxaso aphambili: $ 48.00, $ 44.00, $ 40.00
USOIL Kukwimeko ephezulu kodwa inyuko ephezulu ijongene nokunye ukwaliwa. Ukuxhathisa kokuqala kwi-70 yeedola kuye kwaphulwa njengoko i-altcoin ifikelele kwinqanaba eliphezulu leedola ezingama-75. Namhlanje, abathengi bayasokola ukophula ngaphezulu kwe- $ 75 ephezulu. Eliphezulu liphezulu lixa elidlulileyo lexabiso lembali kaJulayi 6. Kwintshukumo yexabiso elidlulileyo, iUSOIL yaxhathiswa njengoko isalathiso sehla kakhulu. Ngeli xesha, ngoSeptemba 1 uptrend; ikhandlela elibuyise umzimba livavanye i-50% yenqanaba lokubuyiselwa kweFibonacci. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba i-USOIL iya kunyuka iye kwinqanaba le-2.0 yokwandiswa kweFibonacci okanye kwinqanaba lama-78.33.
I-USOIL (WTI) ikwinqanaba lama-66 le-Relative Strength Index ixesha le-14. Ibonisa ukuba i-USOIL ikummandla wonyuselo-ntla nangaphezulu komgangatho osembindini wama-50. Akukho ndawo yaneleyo yokuhlangana phezulu. I-USOIL ine-crossover ekhulayo. Yiminqweno yeentsuku ezingama-21 ze-SMA ezingaphezulu kweentsuku ezingama-50 ze-SMA ezibonisa umqondiso wokuthenga.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, ixabiso le-WTI lihamba ecaleni. Isalathiso sijamelene nokumelana kwindawo ephezulu ye- $ 76.65. I-WTI ngoku ihamba ecaleni ngenxa yokuxhathisa kwangoku. Abathengi baphinde bakuphinda kabini ukunganyangeki. Ngeli xesha, ngoSeptemba 28 uptrend; umzimba wekhandlela ovavanywe ngokutsha uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci engama-61.8%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba i-USOIL iya kunyuka iye kwinqanaba le-1,618 yokwandiswa kweFibonacci okanye inqanaba le- $ 80.87.
I-USOIL ingaphezulu kwe-80% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Isalathiso sifikelele kummandla othengiweyo wentengiso. Ukuqhubela phambili ukuya phezulu kuyathandabuzeka njengoko abathengisi bevela kwingingqi ethengiweyo.
USOIL (WTI) ikwindawo ephezulu. Ukunyuka okuthe kratya kuyathandabuza kuba istochastic semihla ngemihla kunye nexesha le-RSI 14 libonisa imeko egqithisileyo.
I-USOIL (WTI) ihamba phambili njengeeBulls zoLwaphulo-mthetho oluyi-76
Ukuhlaziywa: 25 Septemba 2021
USOIL bekukuhambo oluphezulu. Abathengi batyhola i-WTI ukuba baphule i-76 yeedola ephezulu. I-uptrend yenza uthotho lweendawo eziphakamileyo eziphezulu kunye nokuphakama okuphezulu. Ukusukela ngoJulayi, abathengi khange bakwazi ukutyhala ngaphezulu koxinzelelo oluphezulu. Ukuqhekeka ngaphezulu kokumelana nentloko kuya kuphelisa intshukumo ebotshiweyo yangoku. Ngeli xesha, ngoSeptemba 16 uptrend; ikhandlela elibuyise umzimba livavanye i-50% yenqanaba lokubuyiselwa kweFibonacci. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba i-USOIL iya kunyuka iye kwinqanaba le-2.0 yokwandiswa kweFibonacci okanye kwinqanaba lama-78.33. Ukusuka kumaxabiso entengo, isalathiso sikwi-uptrend esondela kwindawo ephezulu ye- $ 73.
I-USOIL ikwinqanaba lama-64 laMandla aMandla aHlanganisiweyo. Kubonisa ukuba imarike ikummandla wonyuselo-ntla nangaphezulu komgangatho osembindini wama-14. I-WTI isondela kwingingqi ethengiweyo engaphezulu. Amandla okonyuka okwangoku kungekudala azakufikelela ekuphelisweni ngamandla. Iintsuku ezingama-50 kunye neentsuku ezingama-21 ze-SMA zijike phezulu zibonisa uptrend. Ixabiso le-crypto lingaphezulu kweentsuku ezingama-50 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-21 ezibonisa ukunyuka okunokwenzeka.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isalathiso kukuya phezulu. Nangona kunjalo, isenzo sexabiso sibonakaliswa ziziphatho zezibane ezincinci zomzimba ezibizwa ngokuba yiDoji. Ngeli xesha, ngoSeptemba 15 uptrend; ikhandlela elibuyise umzimba livavanye i-50% yenqanaba lokubuyiselwa kweFibonacci. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba i-USOIL iya kuwa kwinqanaba le-2.0 yokwandiswa kweFibonacci okanye kwinqanaba lama-78.33.
I-USOIL ingaphezulu kwe-80% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Oku kubonisa ukuba imarike ifikelele kwingingqi ethengiweyo. Imakethi ithengwe kakhulu ukusukela nge-22 kaSeptemba.
I-USOIL ikwisantya esiphezulu. Unyango lwangoku kulindeleke ukuba luphindaphinde okanye lwaphule uxhathiso lwentloko. Ngelishwa, i-stochastic yemihla ngemihla ibonakalise imeko egqithisileyo. I-RSI ikwafikelela nakwindawo egqithisileyo.
Unokuthenga iingqekembe ze-crypto apha: Thenga uMqondiso
I-USOIL (WTI) iyehla kwi-Downsides, i-Faces Rejection kwinqanaba le- $ 73
Ukuhlaziywa: 18 Septemba 2021
USOIL bekukuhambo oluphezulu. Isalathiso sifikelele kwinqanaba eliphezulu le- $ 73.11 kodwa ujongene nokuchasana kwinqanaba eliphezulu kutshanje. Kwintshukumo yexabiso elidlulileyo, i-WTI ifikelele kwinqanaba eliphezulu leedola ezingama-74 kodwa ijongene nokugatywa okungqongqo. Imakethi yehle kakhulu isezantsi i- $ 61.50. Ngeli xesha, ngoSeptemba 2 uptrend; umzimba wekhandlela ovavanyiweyo uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci eyi-78.6%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba i-USOIL izakuphakama kodwa ibuye umva kwinqanaba 1.272 ulwandiso lweFibonacci. Ukusuka kwisenzo sexabiso, isalathiso siphinde saphinda saya ezantsi.
I-USOIL ikwinqanaba lama-59 lamaxesha aMandla aNxulumene noko. Ibonisa ukuba imarike ikummandla wonyuselo nangaphezulu komgangatho osembindini wama-14. Iintsuku ezingama-50 kunye neeSMA zeentsuku ezingama-21 zijonge phezulu
ebonisa uptrend. Ixabiso le-crypto lingaphezulu kweentsuku ezingama-21
kunye ne-SMA yeentsuku ezingama-50 ebonisa ukunyuka okunokwenzeka.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isalathiso sihamba ecaleni. Ukusukela nge-15 kaSeptemba, i-USOIL ifikelele kwinqanaba eliphezulu le-73 yeedola kodwa yajongana nokuchasana kwinqanaba eliphezulu. Kwiintsuku ezine ezidlulileyo, isalathiso sihamba ecaleni. Okwangoku, ngoSeptemba 17 ezantsi; umzimba wekhandlela ovavanywe ngokutsha uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci engama-61.8%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba i-USOIL iya kuwela kwinqanaba le-1.618 yeFibonacci eyandisiweyo okanye inqanaba le- $ 70.32.
USOIL-2 Itshathi yeYure
I-USOIL ingaphantsi kwe-50% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Oku kubonisa ukuba intengiso ikwi-bearish umfutho. Ii-SMAs zitshibilika ngokuthe tye zibonisa ukuhamba ecaleni.
I-USOIL ikukuhla ezantsi emva kokwaliwa kwinqanaba lama- $ 73. Ngokwesixhobo seFibonacci, i-USOIL iya kuwa kwinqanaba le-1.618 yeFibonacci eyandisiweyo okanye inqanaba lama-70.32 kwitshathi yemihla ngemihla, uxinzelelo lokuthengisa luya kuqhubeka kwakhona ukuba amaxabiso ehla ezantsi kwemilinganiselo ehambayo.
I-USOIL (WTI) Ukuchaswa kobuso kwi-70 yeedola njengoko iqala kwakhona ecaleni kwendlela
Ukuhlaziywa: 11 Septemba 2021
USOIL (WTI) yexesha elide: Ukunyusa
USOIL ikwi-uptrend kodwa inyathelo eliya phezulu lijamelene nokumelana kwinqanaba lama- $ 70. Ukusukela nge-2 kaSeptemba, i-WTI ibisemacaleni xa iinkunzi zeenkomo zisilela ukwaphula ngaphezulu kwe- $ 70 ephezulu. Ukuba abathengi baqhekeza ngaphezulu kwenqanaba lokumelana, intengiso iya kuphakama kancinci kodwa i-uptrend iya kuhlala ixesha elifutshane. Ngeli xesha, ngoSeptemba 2 uptrend; umzimba wekhandlela ovavanyiweyo uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci eyi-78.6%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba i-USOIL izakuphakama kodwa ibuye umva kwinqanaba 1.272 ulwandiso lweFibonacci okanye inqanaba lama- $ 72.72.
Itshathi Yemihla ngemihla ye-USOIL
I-USOIL (WTI) ikwinqanaba lama-53 le-Relative Strength Index isithuba se-14. Ibonisa ukuba i-USOIL ikummandla wonyuselo-ntla nangaphezulu komgca osembindini wama-50. Imilinganiselo ehambayo ithambeka ngokuthe tye ibonakalisa indlela esecaleni. Imivalo yamaxabiso isephantsi kwee-SMAs ezibonisa ukuba intengiso iya kuwa.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, ixabiso le-WTI lihamba ecaleni. I-WTI iyaguquguquka phakathi kwamanqanaba eedola ezingama-67 kunye nama-70 eedola. Isalathiso siye sahamba ecaleni ngenxa yokumelana ne- $ 70. Ukuhamba emacaleni kuyafuneka njengoko abathengi besilela ukophula ukuxhathisa okungaphezulu. Namhlanje, i-altcoin ijongene nokuchasana kwinqanaba eliphezulu kutshanje. I-WTI inokuthi iwe.
UKUSETYENZISWA -Iyure eyi-4 yeKwayara
I-USOIL ingaphezulu kwe-80% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. I-USOIL ifikelele kummandla othengiweyo ongaphaya kwemarike. Intsingiselo kukuba intengiso iyakuwa ezantsi. Iintsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMAs zijike ngokuthe tyaba zibonisa uptrend. Abathengisi baya kuvela kwingingqi ethengiweyo yokutyhala amaxabiso ezantsi.
USOIL (WTI) ikwindawo ephezulu. Nangona kunjalo, uptrend uphelisiwe njengoko isalathiso siphinde saqala sihamba ecaleni. Okwangoku, ijongene nokwaliwa kwindawo ephezulu yamva nje. I-WTI inokuthi iwele kumaxabiso asezantsi kwinqanaba lama- $ 67.